Ibsa ABO: Ajjeechaa Ilmaan Oromoo Irratti Dhoksaan Hammarreessa Keessatti Barootaan Raawwatamaa Ture Ifa Bahe
Posted: Waxabajjii/June 13, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (2)
The English version of the press release from the Oromo Liberation Front (OLF) was published here.
Ajjeechaan jumulaa, hidhaa, hiraar, saaminsaa fi cunqursaan bittoota Itophiyaan ummatoota Itophiyaa irra gahu kan barootaan lakkaa’ame, wayyaa’uu hin dandeenye dhaalamaa as gahe dha. Hammeenyi raawwatamu kunis ijaarsa empaayera Itophiyaan asitti kan mudate qofa miti. Ijaaramuu Itophiyaa har’aan durattis Kaaba biyyattiitti kan bittootan raawwatamaa ture dha. Maaliif? gaaffii jedhuuf deebiin gabaabaan mootummootni aangootti kan dhufan seeraani fi hayyama ummataan ala tahuu irraa ti. Waan taheef bituuf, ummatni jilbeenfatee isaan jalatti akka bulu taasisuuf gara-jabinaan fixu. Jiilchanii, qor-qalbii cabsuun bittaa isaaniitti iggitii godhachuu barbaaddu. Aangoon hayyama ummataan alatti ykn seerawaa hin taane ammoo ummata biratti fudhatama hin argatu. Kanaaf hariiroon ummataa fi humna aangoo siyaasaa humnaan dhuunfate gidduutti uumamu kan ajajaa fi ajajamaan alatti kan biraa tahuu hin danda’u.
Abbootiin irree yoomiyyuu aangoo dhuunfatan turfatuun olitti dhimmi ittiin hojooman kan biraa hin jiru. Aangoo humnaan dhuunfatan turfatuuf ajjeechaa gara-jabinaa fi jumulaa, hidhaa, saaminsa, doorsisaa fi tooftaalee humnaa birootti fayyadamu. Empaayera Itophiyaa keessatti kan mul’ataa turee fi jiru kanuma. Empaayera Itophiyaa humnaa fi gargaarsa warra dhihaan uumanii humnaa fi gargaarsa warra dhihaan jiraachisan. Mootummootni hanga ammaatti mul’atanis kan ummatootaaf gara-laafina hin qabne, sirna cunqursaa tarkaanfachiisan tahuu irraa empaayera humnaan tolfatanii humnaan jireessan hiyyummaa fi boodatti- hafummaa hanga har’aatti keessaa bahuu hin dandeenye keessatti akka korkodamtee haftu taasisan.
Bittootni Itophiyaa aangoo humnaan argatan humnaan tikfatuuf jecha tarkaanfii fudhatamaa ture keessatti ummatootni Itophiyaa miidhaman danuu tahanis kan ummata Oromoo bittoota biratti diinummaa addaan waan ilaalamuuf dhumiinsi irra gahaa turee fi jiru suukanneessaa dha. Waxabajjii 10, 2014 Baha Oromiyaa naannoo Hammarreessaatti lafti investarootaaf kenname osoo qotamee tottolfamuu lafeen lammiilee Oromoo jumulaan mul’ate, hammeenya mootummootni Dargii fi Wayyaanee ummata Oromoo irratti raawwataniif ragaa qabatamaa tahuutti dabalee ajjeechaan dhoksaan raawwatamu marti dhokatee kan hin hafne tahuu mirkaneessa.
Lammiileen hedduu lafeelee ilmaan Oromoo mul’atan waan hin beekneef kan eenyuu akka tahee fi eenyuun akka ajjeefaman ummata odeessa gahaa hin qabneen gahuudhaan hubachiisuun barbaachisaa taha.
Yeroon isaa kufaatii Dargii jala waan tureef ummata baqattummaa irraa deebi’e kana qabuun mooraa waraanaa Hammarreessaatti geessuun hidhe. Kufaatiin Dargii kan hin hafne tahuun mirkanaa’aa wayta dhufetti ajajoota waraana mootummaa Dargii naannoo sanaa kan turan General Biraanuu Jambaree fi General Wubshet Dassee muddamsuun baqattoota Oromoo kan miseensotni fi deggertootni keessatti argaman Hammarressatti hidhaman irratti murtii du’aa hatattamaa dabarsan. Akka kanaanis lammiileen Oromoo jaarolii, dubartoota, ijoollee, dukkubsatoo fi qaamaa- hir’attootni keessatti argaman 350 gahan bakka tokkotti waraanni Dargii rashanee biyyee itti deebise. Wayta Waraanni Dargii ummata jumulaan rashane kanattis miseensotnii fi deggertootni ABO osoo itti dhuka’aa jiruu, Dhiigni keenya bilaashatti dhangala’ee hin hafu! Oromiyaan ni bilisoomti! jechuun dhaadataa lubbuun dabarte.
Dargiinis tahe Wayyaaneen dhoksaan hambisuuf dhoksaan ajjeesan iyyuu haqni yoomiyyuu dhokatee waan hin hafneef ajjeechaan dhoksaan raawwatame kun Waxabajjii 10, 2014 ifa bahe. Seenaa ilmaan Oromoo Oromummaan diina taasifamanii rashanaman kanneenis ummatni Oromoo kabajaa akka argatan taasisuu fi sirna awwaalchaa malu gochuufiin dirqamaa fi gaafatama isaa ti.
Ibsii reefuu ba1u kun hangam akka duubati affine argisiisa. Yoo kan beektan ta`e maliif hanga lafeen ba`uti eegdan? Silaa utuu duraan akka hin qotamne uumataaf ibsitan ta`ee galata qabdu. Utuu yeroo hundaa akka eegee booda yaa`uu kana dhaabne gaariidha.
Walk a walk than talking a talk!! Hanga guyyaa har’aa eessa turtan! Wayta ta’iin (incident) tokko uumamu qofa jala deemanii website irratti waamaxxansuun jireenya keessan hinmirkaneessu! Ibsa kana ABO osoo hinta’in reeffi warra wareegame tuqamnaan EKERAAN isaanii akka dubbattetin ilaala! Leave the way to QUBEE generation!!!